Sida Looga Faa'iidaysto Sicir Bararka: Ikhtiyaarada Maalgelinta - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Sida Looga Faa'iidaysto Sicir Bararka: Fursadaha Maalgashiga
Isha sawirka: Entreprenoria.com
Sicir bararka ayaa ahaa caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha dhaqaalaha dalal badan. Barashada sida looga faa'iidaysto sicir bararka waa xirfad ganacsi kastaa uu leeyahay si uu u barto. Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa inaad ka faa'iidaysan karto sicir-bararka dhaqaalaha sii yaraanaya.
Waa Maxay Sicir -bararku?
Sicir bararka waxa lagu qeexaa in uu yahay korodhka guud ee qiimaha dhaqaale ee muddo cayiman. Kaydka Federaalka wuxuu inta badan higsanayaa sicir-barar hooseeya oo xasilloon oo ku dhow 2%, taas oo muujinaysa in dhaqaaluhu korayo. Si kastaba ha ahaatee, jahawareerka dhaqaale ayaa sababi kara in sicir-bararka uu gaaro laba lambar.
Sannadihii la soo dhaafay, sicir-bararka ayaa ahaa caqabadda ugu weyn ee dhaqaalaha badankiisa. Qiimaha ayaa kor u kacay 10% ilaa 15% sannadaha qaar intii lagu jiray 1970-yadii iyo 1980-aadkii. Sicir bararka ayaa hoos u dhacay wixii ka dambeeyay.
Heerarka sicir-bararka ayaa isbeddelay inta u dhaxaysa 2% iyo 5% sannadihii 2000aadkii, halka uu kor u kacay inta u dhaxaysa 0% iyo 2% 2010-kii. Si kale haddii loo dhigo, marka loo eego xilliyada kale ee taariikhda, qiimuhu aad buu u degganaa sannadihii u dambeeyay.
Dhanka kale, Sicir-bararka ayaa beryahan dambe soo laba kacleeyay oo laga dooday. Sicir-bararka ayaa ahaa 5.4 boqolkiiba 12 bilood ee dhammaanaya Juulay 2021, mid ka mid ah heerarkii ugu sarreeyay sannado badan.
Sidee buu u shaqeeyaa heerka sicir-bararka?
Sicir bararka ayaa inta badan lagu muujiyaa boqolkiiba, taasoo muujinaysa in qiimaha badeecada ama adeeggu uu kordhayo. Waxay dhacdaa marka dawladda ama hay'ad kale ay gacanta ku hayso qiimaha alaabta iyo adeegyada. Mushaharka iyo qiimaha alaabta, dhanka kale, waa la ogol yahay inay kor u kacaan ama hoos u dhacaan baahida.
Tani waa korodhka qiimaha badeecadaha iyo adeegyada sannad kasta. Sicir-bararka ayaa inta badan loo arkaa arrin aan laga maarmi karin oo ka mid ah nolosha dalalka horumaray. Waxa hoos u dhaca marka siyaasad lagu xakameeyo sicir-bararka la sameeyo, waxana la kordhiyaa marka badeecadaha ama adeegyada qaarkood gabaabsi yihiin.
Wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa 1980-meeyadii qaatay siyaasad lacageed oo adag si ay ula dagaalamaan sicir bararka iyo kor u qaadida kobaca dhaqaalaha. Tani waxay horseeday xilli kobac dhaqaale oo degdeg ah Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, laakiin ay la timid qiimo sare.
Sicir-bararka waxa loo kala saari karaa saddex qaybood:
Sicir-bararka ka dhasha baahida wax-soo-saarka oo ka sarraysa waxa loo yaqaan sicir-bararka baahida-jiid-saarka. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira baahi ka weyn baahida alaabada oo ka badan tan hadda jirta ay dabooli karto. Taasi waxay keentay in qiimaha maciishada kor u kaco.
Sicir-bararka qiimaha- riixa ahi waxa uu yimaadaa marka kor u kaca kharashka wax-soo-saarka uu ka dhigo wax-soo-saarka isla badeecada mid qaali ah ganacsiyada. Natiijadu waxay tahay kororka qiimaha agabka wax-soo-saarka, sicirka suuqa ayaa kor u kacay.
Sicir bararka la dhisay waxa uu yimaadaa marka ay shaqaaluhu dalbadaan mushahar kordhin si ay ula socdaan kor u kaca kharashka nolosha. Sicir bararka noocaan ah wuxuu dhalin karaa saameyn jawaab celin ah, taas oo ganacsiyadu ay tahay inay si joogto ah u kordhiyaan qiimaha si ay ula socdaan kor u kaca kharashka shaqada.
Ma jirtaa sabab aan uga fekero sicir-bararka?
Sicir-bararka waxa uu leeyahay saameyno kala duwan oo aan xasiloonayn, kuwaas oo ay ugu cadcad yihiin in ay baabi'iyaan awooddaada wax iibsiga muddo ka dib. Sicir bararku markuu dhaco, dollarku waxa uu iibsanayaa alaab iyo adeegyo ka yar intii uu hore u iibsan jiray.
Sababtoo ah heerka dulsaarka ayaa si aan caadi ahayn u hooseeyay tobankii sano ee la soo dhaafay, maalgashadayaasha muddada dheer iyo kuwa hawlgabka ah ayaa si isku mid ah u noqday kuwo aad uga dheregsan khatarta sicir bararka. Mustaqbalka, sicir-bararka waa in loo aqoonsadaa khatarta dhabta ah ee hawlgabka raaxada leh haddii aan si sax ah loo xisaabin.
Sicir-bararku waxa uu sii kordhiyaa hubin la’aanta dhaqaalaha. Cadaadiska sicir bararka ayaa ku qasbaya Guddiga Kaydka Federaalka inuu wax ka qabto, kaas oo la filayo inuu kor u qaado heerka dulsaarka jawaabta. Muddada gaaban, ficillada Fed waxay keeni karaan isbeddelka suuqa saamiyada, iyo sicirrada kor u kaca waxay keeni karaan lacagaha curaarta inay lumiyaan qiimaha.
Ugu yaraan, khatarta sicir-bararka (iyo hubin la'aanta sii kordheysa) waa sabab dheeraad ah oo lagu eegayo istaraatiijiyada maalgashiga si loo hubiyo in hantidaada si habboon loo kala duwan yahay. Portfolio kala duwan oo si fiican u kala duwan oo aan si xad dhaaf ah ugu tiirsanayn nooc kasta oo hanti ah ayaa ah meel wanaagsan oo laga bilaabo marka ay timaado ilaalinta lacagtaada sicir-bararka.
Waa maxay faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sicir-bararka?
Sicir bararka hooseeya oo xasiloon wuxuu calaamad u noqon karaa kobaca dhaqaalaha.
Waxay faa'iido u leedahay kuwa leh dayn-go'an, sida amaahda guryaha.
Waxay ku dhiirigelisaa dadka inay hadda iibsadaan halkii ay ka dambayn lahaayeen.
Sicir bararka waxa uu hoos u dhigaa awooda wax iibsiga isagoo hoos u dhigaya tirada alaabta uu dollar kastaa iibsan karo.
Macaamiisha ayaa dhaawaceysa natiijada qiimaha sare ee dhaqaalaha oo dhan.
Waxay dhibaato ku tahay hawlgabka dakhliga go'an.
Waxay ku dhiirigelisaa Kaydka Federaalka inuu tallaabo qaado.
Sida Lacag Looga Sameeyo Sicir Bararka
Sicir bararku waa nimco. Sidee?
Tixgeli sicir-bararka fursad aad dib ugu qiimeyn karto dhammaan faylalkaaga, sida ay ku dhacdo fasax ama fasax la'aan. In kasta oo sicir-bararka uu dhawaan sare u kacay, heerka dulsaarka ayaa ku sii jiray hoos u dhac ku dhow Ogosto 2021.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagula dagaallamayo sicir-bararka waa in la hubiyo in si habboon loo kala duwan yahay oo si buuxda loo maalgeliyo si joogto ah. Muddada dheer, lacagta lagu maalgeliyo kaydka waxay u janjeertaa inay ka sarreyso sicir-bararka, halka hantida ma-guurtada ah, badeecadaha, TIPS, iyo I-bonds ay bixin karaan oo kaliya kala duwanaansho dheeraad ah. Haddii dulsaarka dulsaarka uu bilaabo inuu kordho, lacagta caddaanka ah ee ku jirta dhinacyada ayaa lumin doonta qiimaha, halka curaarta muddada-dheer ay saameyn doonto.
Guud ahaan, xilliyada sicir-bararka (haddii ku meel gaadh ah ama mid joogto ah) ayaa ku siinaya fursad aad dib ugu eegto xaaladdaada dhaqaale oo aad wax ka beddel ku samayso mustaqbalka.
Sideen uga faa'iidaysan karaa jawi sicir barar?
Haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato sicir-bararka, halkan waxaa ah shan xeeladood oo ilaalinta sicir-bararka si ay kaaga caawiyaan inaad sii sabbayso marka qiimuhu kordho:
1.Suuqa hantida ma guurtada ah
Inta lagu jiro xilliyada sicir-bararka, guryaha hal qoys ee lagu maalgeliyay dulsaar hoose, deyn-go'an ayaa u muuqda inay si fiican u shaqeeyaan. Marka uu sicir bararka kor u kaco, qiimaha gurigaagu waxa ay u badan tahay in uu kordho halka kharashka adeega ee bilaha ah ee dayntaada uu yahay mid joogto ah. Tani waxay xuddun u tahay ururinta sinnaanta guriga, taas oo si weyn kor ugu qaadi karta qiimahaaga saafiga ah.
Waxaad naftaada uga ilaalin kartaa kor u kaca kirada adiga oo iibsanaya hanti ma-guurto ah. Kirada, sida alaabada kale ee la isticmaalo, waxay u janjeertaa inay kor u kacdo marka sicir-bararka uu kordho. Amaahyadu waxay faa'iido ka helaan heshiisyada kirada marka sicir-bararka uu sarreeyo, inkastoo xaqiiqda ah inay dabacsan yihiin.
2. Saamiyo qiimo sare leh
Sida laga soo xigtay cilmi-baarisyada qaarkood, saamiyada qiimaha ayaa ka sarreeya kaydka koritaanka inta lagu jiro xilliyada sicir-bararka. Shirkadaha dakhligoodu xooggan yahay marka loo eego qiimaha saamigooda hadda waxa loo arkaa kayd qiimo leh. Waxa kale oo ay caan ku yihiin inay haystaan ​​lacag caddaan ah oo xoog leh, kuwaas oo maalgashadayaasha ay abaalmariyaan marka qiimaha saamiyadu kor u kaco.
Kaydka kobaca, dhanka kale, waxay aad ugu nugul yihiin isbedbedelka heerka dulsaarka, taas oo ah jawaab-celinta siyaasadda lacageed ee caadiga ah ee sicir-bararka. Kaydka kobaca ayaa si fiican u socday tobankii sano ee la soo dhaafay markii sicir-bararka uu si cad u maqan yahay. Kaydka qiimaha, dhanka kale, ayaa dhawaan soo laabtay. Guushooda waxay u badan tahay inay ku sii socoto deegaanka hadda jira.
3. Alaabta iyo adeegyada
Dahabka iyo biraha kale ee qaaliga ah iyo waliba alaabta ceeriin iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah ayaa tusaale u ah badeecadaha. Si fudud loo dhigo, marka baahida dhaqaale korodho, qiimuhu kor u kaco, iyo kharashka wax soo saarka si loo daboolo baahidaas caadi ahaan kor u kaca.
Xiliyada hubaal la'aanta, badeecooyinka waxaa caadi ahaan loo arkaa hanti meel nabdoon ah. Badeecadaha, si ka duwan kaydka iyo curaarta, ma bixiyaan faa'iidada ama ma muujiyaan ganacsi kasta oo hoose. Iyagu sidoo kale iskuma xidhna waxayna u dhaqaaqaan jihooyin iska soo horjeeda.
Securities-ka Ilaalsan Khasnadda, ama TIPS, waa dammaanadaha khasnadda Maraykanka ee la suuq-geyn karo oo loogu talagalay inay ka ilaaliyaan nabaad-guurka awoodda wax iibsiga. TIPS waxay ka faa'iidaysanaysaa hagaajinta sicir-bararka ee xilliyeedka, kuwaas oo aan la heli karin curaarta caadiga ah ee heerka go'an.
TIPS waa in loo tixgeliyo qayb ka mid ah qaybta faylalka khatarta hoose leh ee maalgashadayaasha doonaya ilaalinta raasumaalka iyo iibsashada xasilloonida awoodda. Dadka haysta TIPS waxay ku kalsoonaan karaan in maamulahooda la soo celin doono sababtoo ah TIPS waxa taageeray rumaysadka buuxa iyo ammaanta dawladda Maraykanka.
Xirmooyinka kaydka ee Maraykanka ayaa noqda maalgashi soo jiidasho leh inta lagu jiro xilliyada sicir-bararka. I-bonds waxa ay ballan qaadaysaa in ay la jaanqaadi doonto sicir-bararka, in kasta oo aad iibsan karto $10,000 oo keliya sannadkii, waxaana loo arkaa dammaanad aan suuq ahayn. Iyaga, sida TIPS, waxay bixiyaan raasumaalka soo celinta ku dhow dammaanad qaadka.
Maalgelinta I-bonds ma keenayso soo-celin sare, laakiin waxay ilaalin doontaa awoodda wax iibsiga ee qayb ka mid ah faylalkaaga. Marka la eego in maalgashiyo badan, sida lacag caddaan ah iyo curaarta muddada-dheer, ay u badan tahay inay lumiyaan qiimaha dhabta ah inta lagu jiro xilliyada sicir-bararka, waxay macno samaynaysaa in la tixgeliyo beddelka kaydka ee sii wadi kara.
6. Lacagta 'cryptoptorency'
Bitcoin waxaa inta badan loogu yeeraa 'dahab dhijitaal ah', iyo sahaydeeda xaddidan awgeed, waa inay aragti ahaan ka ilaalisaa sicir-bararka. Si kastaba ha ahaatee, xeerbeegtida ayaa wali ka maqan in ay noqon doonto xayndaab sicir barar oo wanaagsan.
Marka laga reebo bitcoin, waxaad sidoo kale iibsan kartaa oo aad maalgashan kartaa qadaadiic kale.
Maalgashadayaashu waxay haystaan ​​dhawr ikhtiyaar oo ay iskaga ilaalinayaan sicir-bararka, laakiin TIPS waa betka ugu badbaadsan. Haddii kale, ka faa'iidayso kor u kaca sicir bararka si aad dib u eegto waxqabadkaaga maalgashiga guud iyo qoondaynta si aad u hubiso in ay waafaqsan tahay ujeedooyinkaaga.
Lassus, oo ah lataliye maaliyadeed, ayaa ku taliya "Sababtoo ah inteenna badan weli waxaan nahay maalgashadayaasha muddada-dheer, ha samayn isbeddello xooggan oo ku salaysan sicir-bararka hadda ama xaaladaha suuqa,"
Sicir bararka ayaad si walba uga faa'iidaysan kartaa haddii aad raacdo tilmaamahan halkan lagu sheegay.
cnbc.com/dooro/halkee-ga-dhigi-lacagtaada-inta lagu jiro-kor u kaca-sicir-bararka/
wealthface.com/blog/sida looga faa'iidaysto-sicir-bararka/
Bangiyadu Sidee Lacag u Sameeyaan?
Maalgelinta Lacagta Kanada